Medicine "Polydex nge phenylephrine" has elwa namagciwane, umphumela anti-inflammatory. I nomuthi iyasebenza ngokumelene amagciwane kakhulu Gram-negative futhi Gram-HIV, ingqondo zokugula ophakathi indlebe ukutheleleka, uhlobo ukuvuvukala.
Kusho "Polydex" (imibono kusukela ochwepheshe ukhombe ke) liphumelele ongaphandle otitis, eczema itheleleke sokuzwa zangaphandle ndima, kuhlanganise. Ngu izinkomba zihlanganisa media otitis ngokuhamba acute ngaphandle umonakalo eardrum.
Kusho "Polydex nge phenylephrine" manual uncoma omdala ukuba 1-5 lehla kabili ngosuku endlebeni ngayinye. Umthamo izingane - 1-2 amathonsi 2 r / d kunyakaza ngamunye sokuzwa. Isikhathi kwesicelo incike emvelweni nasembulungeni ngobucayi zokugula (izinsuku eziyisikhombisa - e isilinganiso). Ngaphambi instillation ibhodlela kufanele ubambe esandleni, ikhambi yokutholwa lokushisa eseduze ukuba izinga lokushisa komzimba. Lokhu kuzogwema wokunganethezeki Ukungena uketshezi epholile ngo indlebe.
Izidakamizwa "Polydex" (impendulo evela kodokotela mayelana nalo mdlalo) is hhayi Kunconywa e izilonda kuhlasimulise noma ezithathelwanayo ngo the eardrum. Izimo zihlanganisa ukungabekezeleli izingxenye.
Medicine "Polydex" (izilinganiso iziguli ukuxwayisa ngale) kungabangela iguliswa isikhumba ukusabela ngenxa hypersensitivity. Uma ukwephula yobuqotho ku eardrum ingozi cishe imiphumela anobuthi phezu vestibular nokuzwa nezinsiza.
Isikhathi isilinganiso ukwelashwa - ngesonto. Uma kungekho yi izinsuku eziyishumi kufanele ubonane nodokotela. Lapho sigcwalisa izidakamizwa "Polydex" (izilinganiso odokotela ukuxwayisa ngale) Gwema ukuthinta esicutshini sendlebe isitsha noma iminwe - kanjalo uvimbele ukudala ezinye okuvela ukutheleleka. Endabeni ka kokunikezwa kwe-ubuqotho tympanic ulwelwesi ukusetshenziswa kwezidakamizwa kungabangela eziyingozi, okuwukuthi, ubuthulu, ibhalansi sifo.
Ephambi kwezinduna hypersensitivity kuya neomycin, ingxenye izidakamizwa "Polydex", kungenzeka engu- ukusabela iguliswa aminoglycoside antibiotic. Lapho kuhlangene ukusetshenziswa kwezidakamizwa ne ejenti zendawo amathuba sensitization ukuba izingxenye ekhona futhi, ngenxa yalokho, letindzala engemihle. Kulokhu, kufanele umise yokwelapha ngokushesha futhi kudokotela. Sekufanele awushiye ka kuqokwa izidakamizwa ngesikhathi sokukhulelwa noma lactation Uchwepheshe aqine. Umuthi ovunyelwe lisetshenziswe izingane ngaphandle kwemingcele. Nokho, ukwelashwa uqhutshwa ngaphansi eduze kweso lwezokwelapha. Lowo mkhuba ubizwa ayifani nomthelela ikhono zomuthi kuya ezokuthutha kanye nokulawula ukunakwa. Kule ndaba, umuthi kungenziwa abantu ukuzibonakalisa ezahlukene isicelo. kusho amacala ukweqisa izidakamizwa iye yachazwa cha. lokushisa Isitoreji umkhiqizo - kuze kube degrees 25.